VaMugabe naVaTsvangirai Vasvika kuMusangano weSADC kuAngola
Musangano wechimakumi matatu nemumwe weSADC Ordinary Meeting, uyo uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuSADC, uri kutanga neChipiri muLuanda kuAngola. Musangano uyu uchazeyawo nyaya yeZimbabwe.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nechikwata chavo, vasvika muAngola neChipiri. Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vakasvikawo kuAngola kwavari kutarisirwa kupindawo mumusangano uyu.
Munyori wezvebazi rekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba, vaudza bepanhau reThe Herald kuti VaTsvangirai pamwe nemutungamiri werimwe bato reMDC, VaWelshman Ncube, havana kukokwa kumusangano uyu, uye vachapinda mumusangano uyu sevanhuwo zvavo.
VaCharamba vati nyaya yeZimbabwe haisi panhaurwa dzichakurukurwa kumusangano uyu.
Asi mutauriri weMDC yaVaTsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vati VaTsvangirai vakakokwa kuzopinda mumusangano uchange uchizeya nyaya yeZimbabwe.
Vatiwo VaMugabe kana vachipinda mumusangano uchazeya nyaya yeZimbabwe, vanenge vasingapinde semumwe wevatungamiri veSADC, asi kuti semunhu ane nyaya iri kuda kugadziriswa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica.
VaMwonzora vatiwo VaMugabe vanopinda mimwe misangano ichazeya nyaya dziri kunetsa muSADC semutungamiri wenyika, asi kwete musangano uchazeya gakava riri muZimbabwe.
Mutauriri weMDC yaVaWelshman Ncube, VaNhlanhla Dube, vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wavo akakokwa kumusangano une chekuita nenyaya yeZimbabwe.
Zvichakadaro, vatungamiri vemasangano akazvimirira vakaenda kumusangano uyu, vanoti vakambochengetedzwa panhandare yendege yeLuanda neMuvhuro kwemaawa mashanu uye vakatorerwa zvinyorwa zvavakanga vatakura.
Vamwe vevemasangano akazvimirira ava vakadzingwa munyika iyi neMuvhuro wakare.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaDewa Mavhinga, avo vari muLuanda, vaudza Studio7 kuti havasati vadzoserwa zvinyorwa zvavo zvakabvutwa nemapurisa emuAngola.
Vatiwo vave kutoshandisa dzinhepfenyuro pamwe nemapepanhau emunyika iyi kushambadza zvavari kuda kuti SADC iite.